Xariga Fahad Yaasiin muxuu noqon doonaa? | KEYDMEDIA ONLINE
Xariga Fahad Yaasiin muxuu noqon doonaa?
Fahad Yaasiin ayaa dhibaato u maraya ku soo laabashada dalka, wuxuuna hada ku xayiran yahay Garoonka diyaaradaha Jabuuti, Keydmedia ayaa xogtaan saakay soo qortay, waxaana hada xaqiijiyay Villa Somalia.
MUQDISHO, Soomaaliya - Macluumaadka ay Keymedia Online ka heleyso caasimadda Jabuuti ayaa sheegaya in Fahad Yaasiin uu ku xayiran yahay isla markaana ay xukuumadda Soomaaliya kusoo rogtay xayiraad dhanka safarka ah.
Xukuumadda RW Rooble ayaa ku andacooneysa in Fahad Yaasiin uu halis ku yahay amniga qaranka, isla markaana uu abuuri karo qas iyo fowdo, taas oo caqabad ku noqoneysa heshiisyadii caalamiga ee lagu dhisay dowladihii isxigxigay ee Soomaaliya.
Golaha Amaanka ayaa maanta ka fadhiya arrinta Soomaaliya, kuwaas oo dhowr jeer soo saaray qaraaro lagu adkeynayo amniga iyo geedisocodka siyaasadda Soomaaliya. Qaraaradaas ayaa intooda badan tibaaxaya in xayiraad dhanka safarka iyo dhaqaalaha la saaro shaqsiyaadka carqaladeynta ku haya siyaasadda iyo amniga nugul ee dalka.
Sargaal ka tirsan madaxtooyadda oo ku adkeystay inaan magaciisa la sheegin ayaa Keydmedia u sheegay in “Waxaa Farmaajo u cadaatay maanta in RW Rooble uu ku guuleystay siyaasadii dibadda, oo looga adkaaday xiriirkii dowladaha dariska marka laba reebo Itoobiya.”
Xukuumadda RW Rooble ayaa ku hawlan sidii kiiska Ikraan Tahliil looga ilaalin lahaa caqabadaha kaga imaanaya dhanka Madaxtooyada, gaar ahaan, madaxweynaha xilkiisu dhamaaday. Dhanka kale, Farmaajo ayaa u muuqda in wadooyin fara badan ay kasoo xirmayaan, siyaasad ahaanna u muuqda “lame duck” madaxweyne fadhiid ah.
Dadka odoraseeya siyaasadda Soomaaliya ayaa ku tilmaamay Fahad Yaasiin halka uu Farmaajo ka dhiman waayay. Xayiraadan iyo xariga Fahad loogu geystay ayaa noqoneysa dharbaaxo kale oo u dhacday madaxweynaha awoodiisu ay gabaabsiga ku socoto.
Wixii soo kordha kala soco Keydmedia.